पल शाहलाई रियल हिरो उपाधी प्रदान ! सपनालाई पुरुष प्रहरीले छातिमा हान्नु नि´न्दनीय भएको भनाइ (हेर्नुहोस भिडियो) – Complete Nepali News Portal
यो पटकको रियल हिरोको उपाधी चर्चित नायक तथा समाजसेवी पल शाह लाई प्रदान गरिएको छ। पल साह रिल मा मात्र नभई रियल मा पनि नेपाली जनताको हिरो बनेका छन उनले लक डाउन भए देखि धेरै ठाउ मा पुगेर गरिब तथा दिन दु´खीको सेबा गरेका छन। तर हिजो प्रहरीले हाम्रो टिम नेपाल को खाना बनाएर भोका हरुलाई खुवाउने थाउ भत्काएको छ।।
तेस्तै – वेवारिसे ला’स व्यवस्थापनमा सक्रियताका कारण चर्चामा आएकी सपना रोक्का मगरले सोमबार आफूलाई सुरक्षाकर्मीले संवे’द’नशी’ल अं’गमा छोएको बताएकी छिन्।
अनामनगरमा हाम्रो टिम नेपाल नामक संस्थाले खाना पकाउन बनाएको टहरा हटाउने क्रममा प्रहरीको पक्राउमा परेकी सपनाले साँझ रिहापछि भनिन्, ‘महिला प्रहरी किन ? महिलाको सुरक्षाको लागि होइन। तर महिला प्रहरी हुँदाहुँदै नगर प्रहरी र नेपाल प्रहरीले मेरो छा’तीमा छोए। मलाई कु’टपि’ट गरे। त्यसपछि म बे’हो’स पनि भएछु।’
लकडा’उनका समयमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएर खानपिनमा समस्या भएकालाई दैनिक खाना उपलब्ध गराउन हाम्रो टिम नेपालले अनामनगरस्थित काठमाडौं महानगरपालिकाको नाममा रहेको खाली जग्गामा टहरा बनाएर खाना बनाउने र त्यहाँबाट विभिन्न ठाउँमा उपलब्ध गराउने काम गरेको थियो।
महानगरपालिकाले पटकपटक त्यहाँबाट हट्न निर्देशन दिँदा पनि नमानेपछि बल प्रयोग गर्नुपरेको जनाएको छ। ‘व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर सडकका वेवा’रि’सेका लागि काम गर्दा यस्तो इनाम मिल्छ भने म निशब्द छु’, रोक्काले भनिन्। उनी पछिल्लो समय हाम्रो टिम नेपालका लागि पनि काम गरिरहेकी छिन्।
खाना खुवाउने काम नरोक्ने भन्दै पन्त भन्छन्- गरिबलाई खाना खुवाएर के अ’प’राध गरेका थियौँ हाम्रो टिम नेपालका विमल पन्तले खाना खुवाउने काम सुचारु रहने बताएका छन्।
‘काठमाडौं महानगरले हामीसँग त्यहाँ भएका खाना पकाउने सामानहरु, ३ सय जोर सिरक डसना, अक्सिजन सिलिण्डरहरु लगेको छ। सडकका गरिब, असहाय, ज्याला मज’दुरी गर्नेहरुलाई खाना खुवाएर हामीले के अ’प’रा’ध गरेका थियौँ ?’ रिहा भएपछि पन्तले भने, ‘ खाना खुवाउने हाम्रो अभियान रो’किँ’दैन। नि’षेधा’ज्ञा नसकिँदासम्म हामी यसलाई कायम राख्ने छौँ। ‘ उनले द्व’न्द्वका’लमा जसरी प्रहरीले वरिपरिबाट आ’क्र’मण गरेको बताए।